इन्टरनेट कस हाम्रो दैनिक जीवनमा intertwined, र हामी अक्सर विनिमय सन्देशहरू अनुमतिको ग्याजेटहरू सबै प्रकारका बिना नै प्रस्तुत छैनन् र सेकेन्ड मा कुनै पनि जानकारी पहुँच बढाउनका। तर, कहिलेकाहीं मात्र एक ल्यापटप गर्न, जीवन दिने हल्का सक्षम, केबल जडान अवस्थामा छ, र उदाहरण, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन लागि, जडान अझै पनि आवश्यक छ। यसैले, ल्यापटप वाइफाइ दिन टाढा सक्नुहुन्छ कि? विन्डोज 8 र अगाडिको विन्डोज7अनुमति।
यो संक्षिप्त समीक्षा मा तपाईं आफ्नो vayfay नेटवर्क कसरी बनाउन सकिन्छ र कसरी विन्डोज 8 वाइफाइ ल्यापटप वितरण गर्न, विस्तार देखाइने हातमा भने मात्र उनी र कुनै राउटर। प्रायजसो, यो सजिलो बनाउँछ। ल्याप्टप लागि मुख्य आवश्यकता एक तार इन्टरनेट जडान र निर्माण-vayfay मोड्युल, साथै सबै आवश्यक चालक हुनेछ। यो विधि संग Windows सञ्चालन प्रणाली 8 अन्तर्गत काम गर्दछ। सुरू गरौं।
पहिलो म तपाईंलाई सिस्टम को मानक हालतमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो विधि ल्यापटप संग वाइफाइ वितरण गर्न Windows 8 मा कुनै पनि अतिरिक्त सफ्टवेयर आवश्यक छैन याद गर्नुहोस् चाहन्छ। पहिलो, तपाईं इन्टरनेट एक ल्यापटप बस कर्ड खींच, घर मा विच्छेद गर्न आवश्यक छ। हामी आवश्यक केही सेटिङ बनाउन गर्दा पछि यसलाई जडान गर्नुहोस्।
कि पछि तपाईं आदेश लाइन खोल्ने साथ सुरु गर्नुपर्छ। यो खोज क्षेत्र "सुरुवात" मेनुमा आदेश cmd टाइप गरेर गर्न सकिन्छ। परिणाम हामी cmd.exe सर्टकट फेला माथि देखा खोज पछि, दायाँ माउस बटन क्लिक बनाउन र प्रशासक रूपमा कन्सोल लन्च कार्यान्वयन।
तेस्रो चरण जो प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ हाम्रो पहिलो टोली, कमीशन गरिनेछ। यो तथापि, तपाईं सन्दर्भ मेनु दायाँ माउस बटन, जसमा चयन "टाँस्नुहोस्" क्लिक पछि देखिने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, Ctrl + V को सामान्य संयोजन काम गर्ने छैनन् मार्फत आदेश लाइन मा प्रतिलिपि आदेश टाँस्न भनेर टिप्पण लायक छ। निम्नानुसार टोली नै छ:
netsh WLAN सेट hostednetwork मोड = अनुमति
तपाईं वायरलेस सेवा को शरीर मा सिर्जना गर्न र सम्पादन नेटवर्क अनुमति को चलिरहेको मोड भनेर हामीलाई सूचित गर्नुपर्छ आदेश कन्सोल प्रवेश पछि। यो हामी, बाटो कि लगभग तेस्रो पहिले नै पारित गरिएको छ भन्न सक्छौं यो साँच्चै सजिलो छ! त्यसैले तपाईं वाइफाइ मार्फत ल्यापटप वितरण गर्न कसरी एक सानो उत्प्रेरित गर्न सक्षम थिए। विन्डोज 8 नै यो हामीलाई मद्दत गर्छ, र यो सुविधा प्रयोगकर्ता देखि बस लुकेको, सुरुमा यो मा शामिल छ।
नेटवर्क यसको मापदण्डहरू सिर्जना र निर्दिष्ट
निम्न आदेश एक वायरलेस नेटवर्क नै सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको छ। तपाईं उनको नाम लागि अनुरोध गर्नुपर्छ, र हाम्रो इन्टरनेटमा पासवर्ड सुरक्षा छरछिमेकी प्रयोग गर्नुभएन। यो गर्न, प्रविष्ट गर्नुहोस्:
netsh WLAN सेट hostednotwork मोड = अनुमति SSID = XXXXXXXXX प्रमुख = YYYYYYYYYYY।
प्रमुख उपयोग = लगातार।
यसलाई जडान गर्न सक्ने पासवर्ड आगत - यस मामला मा, वर्ण XXXXXXXX आफ्नो भविष्य वायरलेस नेटवर्क को नाम, र YYYYYYYY संकेत गर्छ। पासवर्ड कम्तिमा आठ अक्षरहरू हुनुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। , यो टिप्न सजिलो थिएन भनेर एक सामान्य जटिल पासवर्ड संग आउन प्रयास गर्नुहोस्। यसरी, तपाईं आफैलाई तपाईं payed इन्टरनेट पहुँच को अनधिकृत प्रयोग जोगाउन। साथै, नेटवर्क नाम र पासवर्ड को परिचय, केवल ल्याटिन वर्ण र संख्या, अन्य आगत प्रतीक प्रयोग खराब र कहिलेकाहीं अस्वीकार्य छ।
एक वायरलेस नेटवर्क अप चलिरहेको
अर्को टीम को मदत पाएर हामी पहिले सिर्जना वायरलेस नेटवर्क शुरू गर्दै छौं। यसो गर्न, तपाईं आदेश शीघ्र मा प्रविष्ट गर्नुपर्छ:
netsh hostednetwork सुरु WLAN।
यो पछि, कन्सोलमा तपाईं पहिले स्थापित नेटवर्क सफलतापूर्वक शुरू राखिएको एक सन्देश देख्नुपर्छ। तर, यो छैन अन्त, किनभने यसले उपकरण संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ, तर हालसम्म त्यो इन्टरनेटमा कुनै पहुँच छ। अर्डर एक प्राप्त गर्न, तपाईं ठीक हाम्रो कन्फिगर पर्छ भर्चुअल राउटर। तर, वाइफाइ ल्यापटप विन्डोज 8 चलिरहेको वितरण गर्न कसरी को मौलिक प्रश्न, हामी पहिले नै, हामी पहिले नै नयाँ नेटवर्क फेला किनभने यो चरण गर्न सक्छन् र यो जडान निर्णय गरेका छौं।
इन्टरनेट पहुँच स्थापना
लागि थप सेटिङहरू विन्डोज सञ्चालन प्रणाली को भाग हो जो नेटवर्क व्यवस्थापन केन्द्र, जाने गर्नुपर्छ। यो कन्ट्रोल प्यानल मा फेला परेन वा प्रणाली ट्रे मा नेटवर्क जडान प्रतिमा मार्फत कल गर्न सकिन्छ। तपाईं लिंक हृदयमा "एडप्टर परिवर्तन सेटिङ" फेला पार्न आवश्यक छ।
अर्को मेनुमा भएपछि, हामी संकेत प्राप्त जो मार्फत इन्टरनेट, हाम्रो तार एडप्टर खोजिरहेका छन्। सामान्यतया प्रायजसो मात्र दुई एडेप्टर, एक तार जडान लागि एक र वायरलेस नेटवर्क को लागि एक मा ल्याप्टप मा रूपमा सजिलो फेला।
गुण जाने यसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, दायाँ-क्लिक। अर्को, ट्याब "पहुँच" र यो प्रयोग गरेर चेक बक्सहरू कम्प्युटर को अन्य प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट जडान प्रयोग अनुमति पाउन, र यो ट्याबमा ड्रप-डाउन सूची मा, हामी हाम्रो पहिले सिर्जना जडान फेला पार्न र यसलाई चयन (यो मात्र एक छ)। विन्डोज 8 वाइफाइ ल्यापटप वितरण गर्न कसरी यो प्रश्न मा लगभग थकित छ।
कि पछि, तपाईं बस कनेक्टर मा शक्ति कर्ड फिर्ता र नव सिर्जना नेटवर्कमा कुनै पनि ग्याजेट जडान गर्नुहोस्। तपाईं केवल ब्राउजर वा सन्देश मार्फत सर्फ गर्न सञ्जाल प्रयोग गर्ने योजना भने कुनै थप सेटिङ आवश्यक छैन। यो आवश्यक छ भने, उदाहरणका लागि, एक धार मार्फत फाइल तपाईँको मोबाइल उपकरणमा त तपाईं कार्यहरू एक जोडी बनाउन आवश्यक हुनेछ डाउनलोड गर्न।
कसरी पूर्ण पहुँच खोल्न
तपाईं धार वा ई-मेल काम मार्फत फाइलहरू डाउनलोड लागि थप प्रोटोकल चलाउन आवश्यक छ भने, त्यसपछि ट्याब "पहुँच" हामी पहिले पत्ता कि, तपाईं बटन "सेटिङ" फेला पार्न आवश्यक छ। जो बीच तपाईं आवश्यक चयन गर्न सक्नुहुन्छ सेवाहरू, को सूची। तपाईंले तिनीहरूलाई को जो आवश्यक हुन सक्छ थाहा छैन भने, सबै भन्दा राम्रो समाधान सबै चलाउन छ। अब तपाईं पूर्णतया कसरी ल्यापटप संग वाइफाइ वितरण गर्न सिकेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ। विन्डोज 8 जब यो तपाईं को लागि पनि अलि बिट सजिलो, तपाईं आदेश लाइन काम गर्न समानान्तर र कसरी बाहिर किनभने भयो।
यो विधि को बेफाइदा
तर, यो संसारमा अरू सबै कुरा जस्तै, एक वायरलेस नेटवर्क सेट अप को यो विधि छैन कमियां बिना छ। ल्याप्टप जडान नेटवर्क रिबुट पछि गायब, र यो फेरि नयाँ सिर्जना हुनेछ। को एडप्टर सेटिङहरू सुरक्षित भएकोले यो कन्सोल मात्र आदेशहरू सल्लाह दिन्छन् गर्न पर्याप्त छ, तर यो धेरै सुविधाजनक छैन अझै पनि छ। कुरा सजिलो, यो प्रक्रिया automates र Windows 8 वाइफाइ ल्यापटप वितरण गर्न मद्दत गर्छ कि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन F1Comp र अन्य साइटहरु यस विषयमा पूर्ण निर्देशन हो। वा, तपाईं मेरो ल्यापटप एउटा सस्तो वायरलेस राउटर खरिद गर्न र केबल को हटाउनु र समस्या बिना घर वरिपरि उहाँलाई सार्न वित्तीय मौका छ भने।
खेल नियन्त्रकहरु। को manipulator प्रयोग गरेर। Manipulators - यो ...
के माउस प्रतिभाशाली चयन? ग्राहक समीक्षा ब्राउज
क्लस्टर - वृद्धि उत्पादकता को एक सार्वभौमिक हालतमा छ
पीसी सर्भर बाट मुख्य मतभेद
VoLTE - यो के हो?
महिला गरेको जूता: वर्णन, बढ्दै मा सल्लाह